ကျွဲနှစ်ကောင် ခတ် တော့ မြေဇာပင် ကြားညှပ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ethnic Groups » ကျွဲနှစ်ကောင် ခတ် တော့ မြေဇာပင် ကြားညှပ်…
ကျွဲနှစ်ကောင် ခတ် တော့ မြေဇာပင် ကြားညှပ်…
Posted by သုရှင် on Jan 14, 2013 in Ethnic Groups |3comments
ကချင်ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေကြရတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ အမြောက်အမြားထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက်မှာ ကြားရသူ တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်း ကိုယ်ချင်းစာပြီး သနားကြရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ဆိုတာ အနိဌာရုံတွေချည်း ဖန်တီးတတ်တဲ့ အရာပင်မဟုတ်ပါလား။ ကချင်အရေးသည် တဖြည်းဖြည်းဖြင့် ပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုမူ မငြင်းဆန်နိုင်ပါချေ။ ပြည်တွင်းသတင်းများတွင်လည်း ကေအိုင်အေ က ဗုံးခွဲသဖြင့် မြစ်ကြီးနား သို့ သွားသော ရထားတစ်စင်း နောက်တစ်ကြိမ်တိမ်မှောက်သွားကြောင်း ရေးသားနေကြသည်။ ယမန်နေ့က အစိုးရ ရဟတ်ယဉ် နှစ်စင်းကို ကေအိုင်အေ က သူတို့ ပစ်ချလိုက်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရဖက်ကလည်း ဒါဟာ စက်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ တိုင်းပြည် ရဲ့ ရပိုင်ခွင့် ( assets ) တွေ ဆုံးရှုံးနေရတာပါ။ လူသားအရင်းအမြစ်တွေ ဆုံးရှုံးရတယ်။ ပစ္စည်းနဲ့ ကိရိယာ အရင်းအမြစ်တွေ ဆုံးရှုံးရတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ အချင်းချင်း ယုံကြည်မှုတွေ ဆုံးရှုံးရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများညီညွှတ်ရေးကောင်စီ( UNFC ) ကလည်း စစ်အစိုးရ ထိုးစစ်ကို ထပ်တိုးလုပ်နေပါက ဆွေးနွေးပွဲ ကို ရက်ရွှေ့  ဆိုင်းထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဦးနိုင်ဟန်သာ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေ ခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်ကို လျစ်လျူရှုနေသယောင် မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောသွားတာကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ လွှတ်တော်သည်လည်း အချင်းချင်း အွန်လိုင်းမှ ဆွေးနွေးကြရန်နှင့် မြန်မာစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်အရှိန်ကို လျှော့ချရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ကြေငြာချက်ထုတ် ပါသည်။ သို့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနုိင်ငံသည် ငြိမ်းချမ်းရေးသို့ ဦးတည်နေပါပြီလော။
ကချင်အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တို့သည် စစ်အစိုးရနှင့် နှစ်ပေါင်း ၆၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေခဲ့ကြသည်ကို သိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အခြားအဖွဲ့ များနှင့် အပစ်ရပ် ရန်သဘောတူခဲ့ကြသော်လည်း ကချင်အဖွဲ့ နှင့် အဘယ်ကြောင့် ပထမ အဆင့်အနေဖြင့် အပစ်ရပ်ရန် သဘောမတူနိုင်ကြ သေးသနည်း။
ရာစုနှစ် ၂ ခုနီးနီး စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ရန် သဘောတူခဲ့ပြီးနောက် မည်သည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုအကျိုးမှ ရမလာသောကြောင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုကို အရင်စမည် ပြီးမှ အပစ်အခတ်ရပ်မည်ဟု ကချင်စစ်တပ် ကဆိုပါသည်။ မည်သို့သော နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမျိုးပါနည်း။ စစ်ကိုင်းမြို့ ထိ ဟု၎င်းတို့ ပြောနေသော ကချင်ဒေသ ခွဲထွက်ရေးလော။ သို့တည်းမဟုတ် ကချင်ဒေသကို ကချင်စစ်တပ်အား အလုံးစုံအာဏာ ပေးပါသည် ဟူ၍ စစ်တပ်မှ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ကြေငြာပေးစေချင် ခြင်းလော။ သို့တည်းမဟုတ် ကချင်ဒေသတွင်နေထိုင်ကြသော မည်သည့်တိုင်းရင်းသားမဆို ကချင်စစ်တပ်၏ အုပ်ချုပ်မှု ကိုသာခံယူရမည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရနှင့်လုံးဝ မဆိုင်ဟူသည့် ကြေငြာချက်မျိုးလော။
သို့တည်းမဟုတ် အခြားတိုင်းရင်းသားများ လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်းနေကြသော ပြည်နယ် အစိုးရများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် တိုးမြင့်ရေး (၀ါ) လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရေး (တစ်နည်း ) ဖက်ဒရယ်( federal ) လော ။ ရှင်းပါသည် ကချင်တို့ အပါအ၀င် အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များသည် ၄င်းတို့နှင့် ဆိုင်သော ပြည်နယ် အသီးသီးတွင် အလိုလို အုပ်ချုပ်ချင်ကြသည်။ ရွေးကောက်ပွဲလည်း မ၀င်လို . သူတို့ ကိုယ်သူတို့ တိုင်းရင်းသားတို့ အပြည့်အ၀ထောက်ခံ နေသော အဖွဲ့ အစည်းအဖြစ် ယုံမှတ်နေကြပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ထိုသို့ ပြည်သူတို့ ထောက်ခံသည် မထောက်ခံသည်ကို သေချာရန်လုပ်ဖို့လိုပါသည်။ ဤနေရာတွင်ရွေးကောက်ပွဲသည် အရေးပါလာပါသည်။ နယ်မြေ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အဆင့်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်မှာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်အရ မဖြစ်မနေ လျှောက်လှမ်းရမည့် လမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။မည်သို့ မျှ ရှောင်လွဲ၍ မရပါ။ ရွေးကောက်ပွဲသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိဖို့ နှင့် သမာသမက် ကျဖို့တော့ လိုအပ်ပါသည်။ ခြိမ်းခြောက်မှု လွှမ်းမိုးမှု ကင်းသော ရွေးကောက်ပွတော့ ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
သို့မဟုတ်ပါက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တို့သည် အာဏာရှင် များနှင့် အလားသဏ္ဍာန် တူနေပါသည်။ မိမိတို့ အာဏာ တည်တံ့ ရေးအတွက် မည်သူ့ ကိုမဆို မည်သို့ လုပ်ပစ်ရမည် မဆို ဆောင်ရွက်လာနိင်ပါသည်။ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေလိုကြသော တိုင်းရင်းသားများစွာရှိပါသည်။ ထို့အတူ ငါ့လူမျိုး ငါ့ဒေသ ငါ့ပြည်နယ် ငါ့အကျိုးစီးပွား စသည်ဖြင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်သူများလည်းရှိပါသည်။ ထိုလူအချင်းချင်းတွေ့ သောအခါ စစ်တိုက်ကြပါသည်။ အင်အားရှိတဲ့သူက အင်အားသုံး အင်အားမရှိတဲ့သူက ပရိယာယ်သုံး နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စစ်တိုက်ကြပါသည်။ ထိုသူတို့လည်း သေကြေကြရသကဲ့သို့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေလိုသော ပြည်သူများမှာလည်း မြေဇာပင် ဖြစ်ကြ ရပါသည်။ ခေါင်းဆောင် လက်တစ်ဆုတ်စာ သို့ တည်းမဟုတ် သဘောထားပြင်းထန်သော လူအနည်းငယ်တို့၏ မတရား အာဏာသုံး ခိုင်းစေမှုကြောင့် လူအများပျက်စီး ကြရပါသည်။
မြန်မာစစ်တပ်ဖက်မှ အမည်မဖော်လိုသော စစ်ဗိုလ် တစ်ဦးက သူ၏ အမြင်ကို အခုလို ပြောပါသည်။
” ပြည်သူတွေက နောက်တမ်းကပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားပါ အပစ်အခက်ကို ရပ်ပါ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကိုင်ပြီး အော်ရုံအော်နေကြတာပါဗျာ။ တကယ်တမ်းငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတာက စစ်တိုက်နေကြရတဲ့ စစ်သားတွေ ပါ။ “
ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ဤသို့ပင် နှစ်ဖက်စလုံးရှိ စစ်တိုက်နေကြသော လက်အောက်ငယ်သားစစ်သားများ အမြင်ရှိကြလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်မိပါသည်။
မြေဇာပင် ကြားညှပ်တယ် …..
ဆား ညှပ်တယ် ….
ဒါတွေ … အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့သွားသင့်တယ် …..
တကယ်စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ရမှာက အဲဒီမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က ခွဲခြင်တာလား
ဒါမှာမဟုတ် ဟိုဘက် ဒီဘက်မှာ ရှိနေတဲ့စစ်ဘုရင်တွေအချင်းချင်း နယ်မြေလုနေကြတာလား
ကြားထဲက နှစ်ဖက်လုံးက ငထွားတွေခါးနာနေတာပါဗျာ
ဘယ်သူတွေဘာတွေဖြစ်ဖြစ် ကြားထဲက ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေသေကုန်ကြတာကိုတော့ တော်တော်လေးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်